ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ဘက်ကမ်းဒသတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း အပါအဝင် အကြီးစားစက်မှုစီမံကိန်းများအတွက် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ဖိတ်ခေါ်၊ ကနဦးတွက်ချက်မှုများအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံမှ ၅ ဘီလီယံနီးပါးလိုအပ်ဟု ခန့်မှန်း | BETV Business News
+95 9444212179 info@betvbusiness.com
နေ့စဉ်သတင်း 25 January 2020
ကန်ဒေါ်လာ (၁)ဘီလီယံ ပမာဏရှိ Yangon Amata Smart and Eco City ကို (၅)နှစ်အတွင်း ဖော်ဆောင်ရန် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆို
နေ့စဉ်သတင်း 24 January 2020
Industrial 4.0 အတွက် CB ဘဏ် ဘာတွေကို ပြင်ဆင်ထားလဲ
ထွက်တိုး စိုက်ပျိုးရေးမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းက အာဆီယံအကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးနည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင်ဆုအား ရရှိ
နေ့စဉ်သတင်း 23 January 2020
လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ဆန်နှင့် ဆန်ကွဲတန်ချိန် (၉၈၀၀၀) ကျော် တင်ပို့ထား
ယခုလကုန်ပိုင်းအထိ ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်း (၁၂)သိန်းအထက်တွင်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နိုင်ဟုဆို
နေ့စဉ်သတင်း 22 January 2020
လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း မတ်ပဲ ပြည်ပဝယ်လိုအားအမြင့်ဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ဟုဆို
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ဘက်ကမ်းဒသတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း အပါအဝင် အကြီးစားစက်မှုစီမံကိန်းများအတွက် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ဖိတ်ခေါ်၊ ကနဦးတွက်ချက်မှုများအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံမှ ၅ ဘီလီယံနီးပါးလိုအပ်ဟု ခန့်မှန်း
admin 17 March 2017
ဆောင်းပါး Viewed: times
နေပြည်တော်တွင် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နှင့် ၁၀ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တတိယအကြိမ်မြောက် Myanmar Global Investment Forum တွင် ဦးဌေးဝင်းက ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"ဧရာဝတီ နောက်ဘက်ကမ်းဒေသက တကယ့်ကို နိုင်ငံတကာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ စက်မှုဇုန်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အလားအလာရှိတယ်။ အဲဒါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကြီးတယ်။ ကြီးတဲ့အခါကြတော့ အပိုင်းလိုက် အပိုင်းလိုက်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေ တာရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာဖိတ်ခေါ်ဖို့ တွေ့တဲ့နေရာမှာ ရှင်းပြတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံတော် Project Bank ကိုလည်း အဆိုပြုထားတယ်" ဟု ဦးဌေးဝင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက် ခန့်မှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) ဘီလီယံမှ (၅)ဘီလီယံ နီးပါးအထိ ရှိနိုင်ပြီး စီမံကိန်းကာလမှာ (၅)နှစ်မှ (၁၀)နှစ်နီးပါးကြာမြင့်နိုင်သဖြင့် စီမံကိန်းအား အပိုင်းလိုက်အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် စီစဉ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်း စီမံကိန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် မိုင်ပေါင်း (၁၇၀) နီးပါး ကမ်းခြေပတ်လမ်းတစ်ခုအား တည်ဆောက်သွားရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
" အခုအကောင်အထည်ဖော်နေတာက ကမ်းခြေပတ်လမ်း၊ ကမ်းခြေပတ်လမ်းဆိုတာက ဂေါ်ရင်ဂျီ၊ ငွေဆောင်၊ ချောင်းသာ၊ ကမ်းသာယာ၊ ဟိုဘက်ဆိုရင် ဂွ၊ ငပလီအထိပေါ့ မိုင်ပေါင်း (၁၇၀) လောက်ရှိတဲ့ ကမ်းခြေပတ်လမ်းကြီးရှိတယ်။ ဒါကို အကောင်အထည်ဖော်နေတယ်။ လက်ရှိလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရယ်၊ ဧရာဝတီအစိုးရရယ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။ ဒါကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာကို ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ဘာကြောင့် ဖိတ်ခေါ်လဲဆိုတော့ ကမ်းခြေပတ်လမ်းကြီးပြီးသွားရင် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် ဝဲ/ယာမှာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွေ ရှိမယ်။ Industry Park ရှိမယ်။ Industry Park ဆိုတာက တကယ်ကို သံမဏိစက်ရုံကြီးတွေ ရေနံချက်စက်ရုံကြီး တွေ ထောင်လို့ရတယ်။ နောက်တခါ ဟိုတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်။ နောက်တခါ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်။ ဝဲ/ယာမှာ ပေါ်လာမယ့် လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့အတွက် ဒါကို ဖိတ်ခေါ်နေတာပါ" ဟု ယင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
အဆိုပါလမ်းပိုင်းအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ အနေဖြင့် ကနဦးလမ်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုများကို ကျပ် ၂ ဘီလီယံနီးပါး အကုန်ကျခံကာ ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အနောက်ကမ်းခြေစီမံကိန်းတွင် ရင်းနှီးမြုှပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် ၊ အမေရိကန် အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၁၀) နိုင်ငံ နီးပါးမှ လာရောက်ဆွေးနွေးမှုများရှိနေကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဆောင်းပါး Business Bees 25 January 2020
အင်္ဂလန်က အိုင်တီဘွဲ့ရ ဦးဇော်ရဲနောင်ရဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့စွန့်ဦးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
ဆောင်းပါး အတွေးအမြင် 25 January 2020
ဆောင်းပါး 22 January 2020
ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ အလားအလာ ဘယ်လဲ ….
ဆောင်းပါး 21 January 2020
New Year Gift for Yesagyo Island Proffered by Parami
ဆောင်းပါး 19 January 2020
တရုတ်သမ္မတရဲ့ မြန်မာခရီးစဉ် ဘာတွေအကျိုးအမြတ်ရလဲ
ဆောင်းပါး Business Bees 18 January 2020
Online ကားအရောင်းအဝယ်ရေးပလက်ဖောင်း CarsDB ကိုတည်ထောင်သူ ဦးဝေယံလင်း
#၂၀၂၀ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်က လှုပ်ခတ်မှုရှိမှာလား?
စွန့်ဦးမွေးမြူရေးသမား(သို့) ရွှေတောင်ညိုကြီးကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ဦးဇော်ရဲနောင်
အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ် UNDER AMOURကို ဈေးကွက်တိုးချဲ့ရန် MK Fashion နှင့် Triple Pte Ltd တို့ ပူးပေါင်း
ထိုင်းအခြေစိုက် ရေချိုငါး ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်